डाक्टर केसीलाई शशि शर्माको आग्रह : अनसन बस्ने नै हो भने रत्नपार्कमा गएर बस्नुहोस् – नेपाली सूर्य
डाक्टर केसीलाई शशि शर्माको आग्रह : अनसन बस्ने नै हो भने रत्नपार्कमा गएर बस्नुहोस्
January 12, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on डाक्टर केसीलाई शशि शर्माको आग्रह : अनसन बस्ने नै हो भने रत्नपार्कमा गएर बस्नुहोस्
काठमाडौं, पुस २८ –चिकित्सा शिक्षा संस्थान् (आइओएम)का डिनबाट पदमुक्त भएका शशि शर्माले डिन बनेर काम गर्न गोविन्द केसीलाई चुनौति दिनुभएको छ ।
उहाँले केसीलाई आफूले काम गरेर देखाउन नसक्ने र अरुले गर्न खोज्दा पनि गर्न नदिने भन्दै कम्तीमा एक वर्ष आइओएमको डिन बनेर देखाउन आग्रह गर्नुभएको हो । शुक्रबार उज्यालो अनलाइनसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘केसीले एक वर्ष आइओएमको डिन बनेर चिकित्सा शिक्षामा अहिले भइरहेको अस्थिरतालाई सुधार गर्नुहोस् ।’
यसअघि २०७० मा शर्मालाई आइओएमको डिन नियुक्त गरेपछि वरियता मिचेको भन्दै डा. केसी अनसनमा बस्नुभएको थियो । डा. केसीको अनसनका क्रममा सरकारले २०७० माघ ८ मा शर्मालाई डिनबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि उहाँले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै अदालत जानुभएको थियो । शर्मा पदमुक्त भएपछि आईओएममा जगदीशचन्द्र अग्रवाल डीन नियुक्त हुनुभएको थियो ।
पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई आईओएमको डिनमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो । उहाँको कार्यअवधि मात्र ४ दिन बाँकी रहँदा उहाँ डिनमा पुनर्वहाली भएका थिए । तर पुनर्वहाली भएको केही समयमा नै फेरि डा. केसी अनसनमा बस्नुभएको थियो ।
शर्माले केसीको व्यवहारप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘डाक्टरको काम सबैभन्दा पहिले बिरामीको हेरविचार गर्नु हो । उहाँलाई मेरो सुझाव छ, पहिले आफ्नो घर राम्रोसँग सपार्नुस् । अनि बल्ल अरू कुरा गर्नुस् । यदि तपाईँले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भने, आफैँ डिन भएर पहिले आइओएम सुधार्नुहोस् । अनि बल्ल रोल मोडलमा चिनिनुहुन्छ । त्यसका लागि म उहाँकै साथमा छु । काम गरेर देखाउनुहोस् । नारा र अनसन बसेर होइन ।’
शर्माले आफू विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक भएकाले डिनबाट राजीनामा दिएपछि पनि आफ्नै कामलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो ‘म बिरामीको सेवा गर्छु, विद्यार्थीहरुलाई पढाउँछु, यो चार दिन डिनमा नियुक्त भएर काम गर्दा सबैले साथ दिनुभएको छ । मेरो काम म सँधै गरिरहनेछु ।’ उहाँले आफू डिनको लागि योग्य भएको दावीसमेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गोविन्द केसीलाई अनसनमा राखेर म डिन बन्न चाहन्नँ ।’ उहाँले केसीलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘चिकित्सा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो । यसरी अनसन बस्दा काम गर्नेहरुलाई समेत डिस्टर्ब हुन्छ । त्यसैले अनसन बस्ने भए रत्नपार्कमा गएर बस्नुहोस् ।’
चिकित्सा क्षेत्रमा भएको अस्थिरताका विषयलाई लिएर डा. केसी पटक–पटक अनसन बस्दै आइरहनु भएको छ । गएको आइतबार शर्मालाई अदालतले पुनर्वहाली गरेपछि केसी अनसन बस्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा लगायतका विभिन्न माग राख्दै केसी चौधौँ पटक अनसन बस्नुभएको छ ।
source : ujyaaloonline
दाइजो नल्याएको निहुँमा घरबाट निकालीइन गीता , बिरोध स्वरूप सेयर गरौ !
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. गल्याङबजार शाखाद्वारा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियत कर्जा प्रदान
March 11, 2019 March 11, 2019 Nepali Surya